तपाईको यो साताको राशिफलले के भन्छ ? | suryakhabar.com
Home राशीफल तपाईको यो साताको राशिफलले के भन्छ ?
तपाईको यो साताको राशिफलले के भन्छ ?
on: २ मंसिर २०७५, आईतवार १२:४२ In: राशीफलTags: No Comments
काठमाडौँ । यस्तो छ तपाईको मंसिर ०२ गते आईतबार देखी मंसिर ०८ गते शनिबार सम्मको साप्ताहिक रासिफल ।
मेष:- (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) पढाई लेखाईमा राम्रो प्रगति हुनेछ भने बौद्धिक कार्यमा सहभागि भई आफ्नो गतिलो प्रश्तुति पस्कने अवसर प्राप्त हुनेछ । परिवार तथा सन्तानबाट तपाईले गरेको काममा सहयोग हुनेछ । माया प्रेममा बिश्वासको बाताबरण बढेर जानेछ भने पति पत्निबिच मायाको डोरो झनै कसिलो हुनेछ । मंगलबार तथा बुधबार समय अनुकुल नभई बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरु हाबि हुनेछन् भने मामा तथा मावलि पक्षबाट आश्वासन मात्र पाईने हुनालेकुनै कुराको आस गर्नु गलत हुनेछ । मुद्धा तथा मामिलामा सामेल भए हारिने अधिक सम्भावना रहेको छ भने न्यायिक निर्णयहरु तपाईको बिपक्षमा फैसला हुनेछन् । बिहिबारबाट पुनह समय तपाईको पक्षमा आउँने हुनालेपारिवारिक तथा ब्याबसायिक यात्राको क्रममा बिभिन्न ठाँउ तथा दृष्यहरुको अबलोकन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रेम गर्ने जोडिहरुका लामो समय सँगै बसेर भलाकुसारि गर्न सक्नेछन् । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा अरुलाई पछाडि पारिनेछ भने साथिभाई तथा आफन्तबाट उत्साहजनक सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
बृष:- (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वा) राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको आलोचनात्मक समर्थन प्राप्त हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय फस्टायर जानेछ । मित्रहरुको लहै लहैमा लाग्नाले पढाई लेखाई कमजोर रहनेछ । छाति सम्बन्धि समस्याले नसताउँला भन्न सकिन्न । परिवार तथा आमासँग छुट्टिएर टाडाको यात्रा हुने हुनालेमन बिचलित हँुनेछ । अध्ययन अध्यापनमा खासै मन नलाग्ने हुदा पढाई लेखाईमा अरु भन्दा पछि परिनेछ । बौद्धिक ब्यात्तित्व तथा अग्रजहरु सँग सैद्धान्तिक मतभेद रहनेछ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले पिरोल्नेछ । आफन्त तथा साथिभाईहरुले नै झुटो आश्वासन देखाएर रुपैया पैसा लिएर फरार हुन सक्छन ख्याल गर्नुहोला । बिहिबारबाट समय तपाईकै पक्षमा आउँने हुनालेवादबिवाद तथा प्रतिश्पर्धामा तिपाईकै जित हुनेछ । मुद्दा मामिला तथा न्यायलयबाट हुने निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने तथा थप लगानि गर्ने बाताबरण बनेर जानेछ । माया प्रेम तथा दाम्पत्य जिवनको गाठो झन् गसिलो भएर जानेछ ।
मिथुन:- (का, की, कू ,घ, ङ, छ ,के,को,हा) आन्तरिक यात्राको तय हँुनेछ भने गन्तब्यमा पुग्नको लागि बिभिन्न चुनौतिहरुको पार गर्नुपर्नेछ । माया प्रेममा धोका तथा पति पत्निबिचको सम्बन्धमा सामान्य मनमुटाब बढ्नेछ । साना तिना स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले सताउँनेछन् । आर्थिक कारोबार बिग्रने हुदा काममा असजिलो महशुष हुनेछ । आफन्त,छिमेकि ,दाजुभाईबाट धोका तथा बिश्वासघात हुनेछ ध्यान दिनुहोला । राम्रा काम गर्दा गर्दै पनि बिपक्षीहरुले अनाबस्यक भ्रम सिर्जना गरेर तपाईको साख गिराउन खोज्नेछन् ख्याल गर्नुहोला । नाफाँ मुलक व्यावसाय भन्दा सेवामुलक व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायलाई समय सापेक्ष आधुनिकिकरण गरि आम्दानिका स्रोत हरु बढाउँन सकिनेछ । बिहिबारदेखि समय परिवर्तन भई बौद्धिक कार्यमा सहभागि भई आफ्नो गतिलो प्रश्तुति पस्कने अवसर प्राप्त हुनेछ । पढाई लेखाईमा अरुदिन भन्दा राम्रो प्रगति भएर जानेछ भने प्रतिश्पर्धामा तपाईनै अग्र पंक्तिमा आउनु हुनेछ । परिवार आफन्त तथा साथिभाईहरुको सहयोग हुने हुनालेसफलताका सिडिहरु चढ्न सहज हुनेछ ।
कर्कट:- (ही, हू ,हे, हो, डा, डी, डु, डे, डो) निति निर्माण तहमा तपाईको प्रखर बोलिको उच्च सम्मान हुनेछ । तपाईको स्पष्ट बोलिले सबैको मन जित्नेछ भने थोरै बोलेर धेरै आय आर्जन गर्न सकिनेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानि बढाई प्रसस्त आम्दानि गर्न सकिनेछ । पारिवारिक माहोलमा दिन बित्ने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ साथै मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । मंगलबारदेखि समय परिवर्तन भई प्रेम प्रशङगमा अबिश्वास सिर्जना हुने तथा पति पत्निबिचको सम्बन्धमा सामान्य मनमुटाब बढ्नेछ । साना तिना स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले सताउँनेछन् । व्यापार व्यावसायमा नाँफा कमाउन निकैनै समय खर्चिनु पर्नेछ । आर्थिक कारोबार बिग्रने हुदा काममा असजिलो महशुष हुनेछ । कुनै योजना भए गोप्य राख्नुहोला दाजुभाई तथा छिमेकिले नराम्रो टिका टिप्पणि गर्न सक्छन् । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको समर्थन पाउन कडा मेहनेत गर्नु पर्नेछ । आधुनिक कृषि प्रणालि अवलम्बन गर्ने किसानहरुले हाते औजार र घरेलु सामान प्रयोग गरेर प्रशस्त आम्दानि गर्न सक्नेछन् ।
सिहं:- (मा, मी, मू , मे, मो, टा, टी, टू ,टे) व्यापार व्यावसायबाट प्रशस्त आम्दानि हुने तथा बिलाशिताका सामानहरु प्रयोग गर्न पाईने हुदा दैनिकि फेरिनेछ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा तपाई नै अब्बल हुनुहुनेछ भने बादबिवाद तथा मुद्दा मामिलामा तपाईकै जित निश्चित छ । जुझारु साथिहरुको संगतले नयाँ कुराको खोज तथा अनुशन्धान गर्ने जागर आउँनेछ । प्रतिष्ठित ब्याक्तिहरुको सँगत तथा भेटघाटले आर्थिक,सामाजिक तथा सास्कृतिक योजना बनाउन ठुलै सहयोग हुनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको साथ रहने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । पारिवारिक जमघटमा दिन बित्ने तथा मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । लेखन कलाको बिकाश हुनेछ भने लेखेरै आफ्ना कुराहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ । पराक्रम बडेर जानुका साथै कामहरु समयमा बन्नेछन् । माया प्रेम तथा पति पत्निबिचको सम्बन्धमा बिश्वासको बाताबरण बढेर जानेछ । छिमेकि दाजुभाई तथा आत्मिय मित्रहरुबाट भने जस्तो आर्थिक तथा भावनात्मक सहयोग मिल्नेछ ।
कन्या:- (टो,पा,पी,पु,ष,ण,ठ,पे,पा) मान सम्मान तथा प्रतिष्ठामा दाग लाग्न सक्छ सजक रहनुहोला । सुधारात्मक कार्यमा खर्च बड्नेछ भने अनाबस्यक ठाउँमा बल तथा बुद्धि प्रयोग हुनेछ सजक रहनुहोला । बिदेशबाट आयात हुने सामानको व्यापार व्यावसाय बाट प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ भने बैदेशिक यात्रा तथा यात्रासँग सम्बन्धित कामहरु हुनेछन् । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्याले सताउने हुदा उपचार खर्च बढेर जानेछ । पढाई लेखाईमा खासै ध्यान नजादा नतिजा अरुकै पक्षमा जानेछ । प्रेम प्रशंगमा सामान्य घटपट हुने तथा पति पति बिच अबिश्वासको बाताबरण सिर्जना हुनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा बिचारको तालमेल नमिल्दा आलोचनाको शिकार होईएला ध्यान दिनुहोला । बिहिबारदेखि समय तपाईकै पक्षमा आई बोलिको प्रभाव बढ्ने हुदा बोलिकै भरमा कामहरु सम्पादन हुनेछन् । कार्यक्षेत्रमा तपाईको कामको उच्च सम्मान हुनेछ । धन सम्पति तथा आय आर्जनमा बृद्धि भएर जानेछ । आफन्त, साथिभाई तथा कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको शुरुवात हुनेछ ।
तुला:- ( रा, री रु, रे, रो, ता, ती, तू ,त) व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त आम्दानि हुनेछ भने अधुरा कामहरु पूरा हुनुका साथै नयाँ कामका अवसर आउनेछन् । बिषेश गरि तरल पदार्थ तथा खनिज पदार्थ सँग सम्बन्धित बस्तुहरुको व्यावसाय फस्टायर जानेछ । आम्दानिका नयाँ नयाँ स्रोतहरु फेला पर्ने तथा सवारी साधन प्राप्तिको योग रहेको छ । मंगलबार तथा बुधबार बिदेशमा उत्पादित सामानको व्यापार व्यावसायबाट मनग्गे आम्दानि हुनेछ । बिदेशि भुमिमा रहेर कमाउँने रुपैया पैसाले घर परिवारको जीवन स्तर उकास्न महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्या आउँन सक्छ ध्यान दिनुहोला । बिहिबारदेखि राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ भने प्रसाशनिक क्षेत्रमा सामेल भई सामाजिक काम गर्ने अवसर प्राप्त हुदा मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । सुन्दर पहिरनमा सजिएर अरुको मन आफुतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । पति पत्नि बिचको सम्बन्ध सुदृड हुनुको साथै माया प्रेमको गाठो गसिलो भएर जानेछ ।
बृश्चिक:- (तो, ना, नी, नू ,ने, नो, या,यी, यू) प्रशासनिक कामकाजमा झन्झटिलो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेछ भने सेवा प्रवाह गर्नेहरुले समयमा तपाईको काम नगर्दिनाले महत्वपुर्ण अवसरहरु गुम्न सक्छ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताबाट आलोचना सहनुपर्ला । कार्यक्षेत्रमा तपाईको निर्णको चर्को बिरोध हुनसक्छ अलि बढि ध्यान दिनुहोला । कामहरु बिग्रने हुदा मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठामा कमिको महशुष हुनेछ । मंगलबार तथा बुधबारको समय राम्रो रहेकोले आर्थिक ब्याबस्थापनका मुद्दाहरु हल भएर जानेछन् भने आम्दानिका नयाँ नयाँ बाटाहरु फेला पर्नेछन् । सानो तिनो प्रयत्नले ठुलै काम सम्पादन हुनेछ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा अरुलाई उछिनेर अगाडि बढ्न सकिनेछ । सरकारि धन सम्पति तथा पैतिक धन हाललागि हुनेछ । उँपहार तथा चिठ्ठा प्राप्तिको योग रहेको छ भने प्रेम प्रशङगमा दिन बित्नेछ । बिहिबारबाट बैदेशिक क्षेत्र सँग सम्बन्धित व्यावसायमा लगानी बढाउँदा प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ भने गैर सरकारि सस्थामा सहभागि हुनुहुन्छ भने प्रशस्त आम्दानि हँुनेछ ।
धनु:- (ये, यो, भा, भी, भू , ध, फा, ढा, भे) लामो दुरिको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको तय हुनेछ । सामाजमा तपाईको काम देखि सबै प्रशन्न हुनेछन् भने मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठा बढेर जानेछ । भाग्यले साथ दिने हुदा थोरै लगानिबाट प्रशस्त आम्दानि हुने तथा सानु प्रयत्नले ठुलो काम बन्नेछ । परिवार तथा आफन्त बाट तपाईको काममा रचनात्मक सहयोग हुनेछ । मंगलबार तथा बुधबार समय तपाईको पक्षमा नहुने हुनालेसरकारि तथा प्रशासनिक कामगर्दा ध्यान दिनुहोला झन्झटिलो प्रकृया अवलम्बन गर्नु पर्ने तथा अनाबस्यक मुद्दा मामिला बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ । सामाजिक कामको सिलसिलामा दिनभर ब्यस्त भएपनि प्रतिफल शुन्य जस्तै हुनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको समर्थन बटुल्न निकैनै मेहनेत गर्नु पर्नेछ । बिहिबारबाट समयमा सुधार आई दाजुभाई तथा आफन्तजनबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । मान्यजन तथा अग्रज ब्यात्तित्वबाट उपदेश तथा आशिर्बाद ग्रहण गर्ने अवसर जुर्ने हुनालेमन प्रशन्न रहनेछ । सरकारि तथा पैतृक धन तथा सम्पति हातलागी हुने योग रहेको छ ।
मकर:- (भो, जा, जी, जू, जे, जो, ख, खी, खू,खे, खो, गा, गी) बुधबार सम्मको समय मध्ययम रहेकोले घर परिवारमा दैनिक आउँने समस्याले सताउने हुदा मानशिक तनाब बढेर जानेछ । माया प्रेममा आफुले माया गरेको मान्छेसँग मनमुटाब बढ्ने छ भने दाम्पत्य जीवनमा सामान्य घटपटको योग रहेको छ । ऋण, रोग तथा संकटको सामना गर्नुपर्नेछ । गोप्य कुराहरु बाहिर आउन सक्छन् ध्यान दिएर काम गर्नुहोला । धर्मका नाममा गलत ब्याक्तिहरुले तपाईलाई प्रयोग गर्न सक्छन् ध्यान दिनुहोला । सरकारि तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्दा संम्यमता अपनाउनुहोला तपाईको खुट्टा तान्नेहरु सक्रिय हुनेछन् । सामाजिक काममा समय खर्च भए पनि जस पाईने छैन । सबैको सुझाब तथा सल्लाहलाई अध्ययन गरि निर्णय आफै लिनुहोला । बिहिबारदेखि राज्यमा सम्मानजनक उपस्थिति रहनेछ भने निति निर्माण तहमा तपाईको बर्चश्व कायम रहनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ । सामाजिक काममा सफलता मिल्ने तथा मानसम्मान,ईज्जत,प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ ।
कुम्भ:- (गू , गे , गो, सा, सी, सू , से, सो, दा) माया प्रेम तथा पति पत्निबिच अबिस्वास सिर्जना हुन सक्छ अलि बढि सचेत हुनुहोला । साझेदारि व्यावसायमा साझेदारहरु बिच मनमुटाब बढ्नेछ भने व्यापार व्यावसायमा नाँफा कमाउन निकै मेहनेत गर्नुपर्नेछ । परिवारका सदस्यबाट तपाईको काममा सहयोग नहँुन सक्छ । यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला अनेक बाधा अड्चन आईलाग्नेछन् । काम गर्दा समयमा होसियार नहुदा अरुलेनै फाईदा लिन सक्छन् । स्वास्थमा समस्या आई उपचार खर्च बढेर जानेछ । साथिभाई हरुले नै असहयोग गर्नेछन् भने अरुको स्वार्थको लागि प्रयोग होईनेछ । भौतिक सामाग्रीको प्रयोग गर्दा वा सवारि साधन चलाउँदा ध्यान दिनुहोला अप्रिय घट्ना घट्न सक्छ । बिहिबारदेखि समय तपाईकै पक्षमा आई अध्ययन अध्यापनमा रुचि बढ्नेछ भने खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सकिनेछ । प्रशासनिक क्षेत्रमा तपाईको बर्चश्व कायम रहने छ भने पदोन्नति हुने तथा नयाँ काम पाउने योग रहेको छ । राजनितिक भेटघाट तथा सामाजिक काममा ब्यस्त भईयला । कामहरु समयमा सम्पन्न हुने हुदा मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठा बडेर जानेछ ।
मीन:- (दी दू थ झ ञ दे दो चा ची) प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरु हाबि हुनेछन् भने पढाई लेखाईमा ध्यान नजानाले अरु भन्दा पछि परिनेछ । मुद्धा तथा मामिलामा सामेल भए हारिने अधिक सम्भावना रहेको छ भने न्यायिक निर्णयहरु तपाईको बिपक्षमा फैसला हुनेछन् । मंगलबार तथा बुधबाररको समय उत्तम रहेकोले नयाँ नयाँ साथिभाईहरु सँग भेटघाट गरि दिन रङगिन बनाउन सकिनेछ भने माया प्रेम तथा पति पत्निबिचको सम्बन्धमा बिश्वासको बाताबरण मजभुत भएर जानेछ । पारिवारिक माहोलमा दिन बित्ने तथा मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । अध्ययन तथा अध्यापनमा अरुलाई पछि पारि अगाडि बढ्ने समय रहेको छ । ब्याबसायिक यात्राको क्रममा नयाँ तथा सुन्दर दृष्यहरुको अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । बिहिबारदेखि समय तपाईको पक्षमा नहुने हुनालेन्यून पारिश्रमिकमा दिनभर समय लगानि गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ । व्यापार व्यावसायमा गरिएको लगानिबाट भनेजस्तो प्रतिफल पाँउन बढिनै समय खर्चिनु पर्नेछ । दिदिबहिनि सँग घरायसि कुरामा राज बाजिने हुदा दैनिक कामगर्न असजिलो महशुष हुनेछ ।तपाईको दिन शुभ रहोस् । –तारानाथ भण्डारी
प्रतिनाद सांगीतिक साँझ २०७५ एकल गायनका साथ गुञ्जिने
प्रधानमन्त्रीलाई जुत्तामा दिईयो खाना !
साप्ताहिक रासिफल (चैत्र ०९ गते आईतबारदेखी चैत्र १५ गते शुक्रबारसम्म)
९ चैत्र २०७६, आईतवार ०६:२४
साप्ताहिक रासिफल (चैत्र ०२ गते आईतबारदेखी चैत्र ०८ गते शनिबारसम्म)
२ चैत्र २०७६, आईतवार ०६:१९
साप्ताहिक रासिफल (फाल्गुन २५ गते आईतबारदेखी चैत्र ०१ गते शनिबारसम्म)
२५ फाल्गुन २०७६, आईतवार ०६:००
२ मंसिर २०७५, आईतवार १२:४२